Epheleleyo Osasazo Ukukhanya Imvelaphi Cob WAKHOKELA kuba Tunnel Ukukhanya FT Uphawu 1014, China Epheleleyo Osasazo Ukukhanya Imvelaphi Cob WAKHOKELA kuba Tunnel Ukukhanya FT Uphawu 1014 Manufacturers, Abanikezeli, Ifektri - FETON CORPORATION Co.,Ltd
Indawo yokuKhangela epheleleyo yeCob ye-LED yeTonela lokuKhanya lweTT Series 1014
Umbala ophakamisayo: Mhlophe ngokufudumeleyo / mhlophe ngokungakhathali / mhlophe qwa
Isixhobo seSiseko: I-ceramic eqhelekileyo
I-CRI: I-Ra95 eqhelekileyo, ehleliweyo 98,99 i-avaialble
Amandla afumanekayo: 20w, 30w, 40w, 50w
Lighting Izibane ezikhanyayo zinombala omkhulu
Iphakheji yeceramic ye-SMT ngedama yobhedu, ibonelela ngobubanzi obunobubanzi.
Ukukhanya kwesibane esondele elangeni kunye notshintsho kubunzulu bemitha ngokusekwe kubume bendawo, umhla kunye nexesha.
◆ Ukumelana kweyona mveliso iphantsi yexabiso eliphantsi
Lighting Umbane wendalo ebonakalayo kwindalo iphela, uqhutywa kukukhanya okunempilo
◆ Ukuvelisa kwakhona kombala okwenyani kunye nokuqaqambileyo, ukubuyela kwimvelaphi yombala
Isidanga esibanzi, kubandakanya i-UVA kunye nezibane ezibomvu kakhulu.
Ndikwanayo ne-CRI ephezulu kakhulu (CRI> 97).
Ubungakanani obuphakamileyo beRobustnessUbubanzi bokukhanya okukhanyayo kunye nokusebenza okuphezulu.
Yimeko-yendalo-inobungane, ixesha elide lobomi kunye nokuthembeka okuphezulu.
(1) Izibane ezide kunye neendawo zokugcina impilo
(2) Iimpawu ezichanekileyo zokunciphisa umbala
(3) Iitudiyo ze-HD kunye nokukhanya okukhethekileyo
Umthombo wokukhanya 1.Our ufezekisa ukubonakala okugcweleyo kunye nokukhanya okuphezulu okumhlophe kufakelo olunye lwe-SMD, olusebenza zombini ukukhanya kwesiko kunye nomthombo wesibane wokukhanya kunye nokuhlobisa umbala okuphezulu.
I-2.Imeko enye yokubeka izinto ezahlukeneyo ze-LED yethu yenza lula uyilo kunye nophuhliso lwe-luminaire, yenza umfutshane umjikelezo wophuhliso kunye nexesha lokuvelisa kunye nokunciphisa iindleko.
I-3.Due ukuphumelela ekunciphiseni ukuxhathisa kwe-thermal, umthombo wethu wokukhanya udala ezinye iindlela zokuthelekisa uyilo lweemveliso ze-luminaire kunye nokusebenza okugqibeleleyo, okusebenzayo kwiindleko, uxinano oluphezulu lwe-lumen, njl.